Taliska Xoogga Dalka oo sheegay in la qaarajiyay horjooge Shab... | Universal Somali TV
Taliska Xoogga Dalka oo sheegay in la qaarajiyay horjooge Shabaab ka tirsanaa
Taliyaha Qaybta 43aad ee Ciidanka Xoogga Dalka, General Cali Maxamed Maxamuud (Bogmadow) ayaa wuxuu goor dhow uu faah faahin ka bixiyay duqayn galabta ka dhacday deegaanka Kuunyo Barrow ee Gobolka Shabellaha Hoose.
Taliyaha ayaa sheegay duqaynta oo ay iska kaashadeen Militariga Somaliya iyo Taliska Ciidamada Mareykanka ee Qaaradda Afrika (AFRICOM) lagu dilay Sheekh Cabdisalaan, oo ahaa buu yiri horjoogihii Shabaab ugu magacawnaa deegaanka Kuunyo Barrow.
Taliyaha ayaa wuxuu tilmaamay in hawgalkan uu ahaa mid qorsheysan, ujeedkiisuna uu ahaa in lagu qaarajiyo Sheekh Cabdisalaan, sida uu yiri.
Taliyaha oo wareysi siiyay idaacadda afka Ciidanka Xoogga Dalka ku hadasha ee Radio SNA ayaa sidoo kale sheegay in Gobolka Shabellaha Hoose ay ka socdaan hawlgalo looga xoreynayo Ururka Al Shabaab.
General Bogmadow ayaa waxaa uu qabaa in weerarada dhinaca cirka ay kaalin muuqato ka qaadanayan dadaalo lagu doonayo in lagu jebiyo Shabaabka hubeysan ee dagaalka kula jira Dowladda Federaalka, Maamul Goboleedyada iyo Xoogaga Nabad Ilaalinta Midowga Afrika.
Diyaaradaha dagaalka Mareykanka ayaa sanadkan dalka ka fuliyay duqaymihii ugu badnaa, marka loo eeggo duqaymihii ay dalka ka gaysteen sanadihii la soo dhaafay.
Kan-xigaAlmaas Elman oo lagu dilay Xerada Cii...
Kan-horeWeerar dhinaca cirka oo ka dhacay Gob...
54,066,419 unique visits